Blogspot Menu ပြုလုပ်နည်း - How To Create Main Menu In Blogger - နည်းပညာ
← ဘလော့ဂါ ဘလော့ရဲ့ အားသာချက်များ – blogger (blogspot) strong points PHP Tutorials For Beginner (Part -1 ) →
11 thoughts on “Blogspot menu ပြုလုပ်နည်း – How to create main menu in blogger”
အကိုရေ label ရေးတဲ့နေရာမှာ အကိုပြောသလို comma ခံပြီး ရေးပါတယ်. update လုပ်တဲ့အချိန်မှာ error လာပြနေပါတယ်.. ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပေးပါဦး.
ဖြစ်နိုင်ရင် screen shot လေးပါတင်ပေးပါ။ ဒါမှသေချာပြောပြပေးလို့ရမှာပါ။
ပုံတွေ မမြင်ရပါဘူး ခင်ဗျာ – ပုံတွေ ပြန်တင်ပေးပါလား
ဟုတ်ကဲ့ .. နောက်ကျရင် ပြန်တင်ပေးပါမယ်။
Myanmar Footy Tip says:
ပုံတွေ မမြင်ရလို့ပါ။ Update post လေး ပြန်တင်ပေးပါလားခင်ဗျ။ ကျေးဇူးပါ
pls, call back photo.;)
Global Myanmar says:
google ads ချိတ်တာလေး တင်ပေးပါဦး ဆရာ။
Blogspot menu ပွုလုပျနညျ: မှ ပုံမြားမမွငျရလို့ မွငျရအောငျကူညီပေးပါဆရာ